ကိုးရီးယားမှာ အလုပ်ရှာမယ် – THE CHAN EDUCATION
Posted on 03/10/2018 03/10/2018 Author The Chan
ကိုးရီးယားမှာ အလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားနိူင်ငံလို ဗီဇာက အဓိကလိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။
အလုပ်ကို နူတူန်ဘူ၊ပွဲစား နှင့် Internet ကနေ ရှာနိူင်ပါသည်။ အများအားဖြင့်် နူတုန်ဘူဆိုတာအလုပ် လုပ်ခွင့်ရ ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်သူများ လျှောက်ရာနေရာဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားနိူင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအောက် ရုံးဖြစ်ပါသည်။ ပွဲစားဆိုတာ ပုဂ္ဂလိက အလုပ်ရှာပေးသော ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှာခ ပေးရပါသည်။ ဗီဇာရှိသူ နှင့် မရှိသူနှစ်မျိူးစလုံးရှာလို့ရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။
တတိယကို ကျနော် ရေးချင်တာပါ။ အင်တာနက်ကနေ အလုပ်ရှာနည်းဆိုတာ အလုပ်လျှောက်တဲ့သူနဲ့ အလုပ်သမား လိုချင်တဲ့သူ ဘယ်သူအကူညီ မပါဘဲ ရှာနည်းဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အင်တာနက် မှာဆိုရင် အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ ပိုများပြီ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဘီာယာဆိုင်၊ ဘား……..ကအလုပ်တွေကို ကြော်ဌာ လေ့ရှိပါတယ်။
အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်တွေထဲမှာ အသုံးများဆုံး (၅)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
PeoplenJob –ကိုးရီးယားမှာ အသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီ အများအားဖြင့် ကိုးရီးယားလို တင်ရေးကြပါတယ်။ NGO, Embassy လို အလုပ်တွေကိုလည်း ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။
Seoul Professionals – အင်္ဂလိပ်ဆရာအလုပ်၊ ဖရိုအလုပ်တွေကို ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။
Craiglist – အင်္ဂလိပ်လို အများအားဖြင့် တင်ရေးကြပြီး၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ ပိုများတာတွေ့ ရပါသည်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှာတဲ့သူတွေအတွက် သင့်တောတဲ့ ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
Seoul Global Center နူင်ငံခြားကူညီရေးတို့ ဘာတို့ ကြောဌာရာ ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
Kopra – Excellent resource for internships, particularly for those from EU nations. Lists opportunities not just for Korea but all over East Asia.
JobSee.kr – New start up in Korea which is focused on providing professional opportunities.
Linkedin – Korean companies are increasingly using services such as Linkedin to advertise positions for foreign talent. Typical companies that advertise positions are Google Korea, Apple Korea and Samsung.
Posted in Koea, Lifestyle•Tagged Jop in Korea•LeaveaComment on ကိုးရီးယားမှာ အလုပ်ရှာမယ်
Author: The Chan
Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.	View all posts by The Chan